Uefa oo xulka qaranka Ruushka u goodiday - BBC Somali
Uefa oo xulka qaranka Ruushka u goodiday
Ruushka ayaa laga eryi doonaa ciyaaraha u dhiman ee koobka qaramada qaaradda Yurub ee sanadkan 2016 haddii dhib kale oo dheeri ah uu dhaco.
Uefa oo ah waaxda maamusha kubadda cagta ee Yurub ayaa hanjabaadaas iyo waliba 150,000 euro ku ganaaxday kaddib markii cabasho ay ka timid ciyaartii Ruushku ay la lahaayeen England ee ka dhacday magaalada Marseille ee dalka Faransiiska.
Ruushka ayaa lagu ganaaxay in taageerayaashoodu ay cunsurinimo muujiyeen iyo in ay dab shid ka sameeyeen garoonka.
Mamnuucitaanka iyo ganaaxa ayaa hirgali doona haddii dhib kale uu ka dhaco garoonka gudahiisa. Arrintaas ayaase racfaan laga qaadan karaa.
Masuuliyiinta Faransiiku dhanka kalana sheegeen in ay celinayan qaar ka mid ah taageerayaasha xulka qaranka ee Ruushka, kuwaas oo ay rumaysanyihiin in ay doonayaan in ay qas ka abuuraan goobaha ay ka dhacayaan koobka qaramada qaaradda Yurub.
Waxay ka mid yihiin labaatan iyo sagaal taageerayaal ah oo jooga agagaarka magaalada Merseille, halkaas taageerayaasha Ruushka iyo kuwa England ay isu dagaaleen sabtidii iyo axaddii.